အပွဈမဲ့အရပျသားမြား အသတျခံနရေခွငျး နှငျ့ပတျသကျ၍ ၀ိုငျးဝနျးရပျတညျပေးကွပါရနျ တိုကျတှနျးခကျြ – Kyaw Zaw Oo's Blog
အပြစ်မဲ့အရပ်သားများ အသတ်ခံနေရခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ၀ိုင်းဝန်းရပ်တည်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းချက်
မြန်မာပြည်သူ မြန်မာပြည်သားများ ခင်ဗျား . . .
မည်သူ့ကိုမှ အန္တရာယ်မပြုသော အပြစ်မဲ့ သာမန်အရပ်သားများကို သေစေရန် ရည်ရွယ်လျက် အရပ်သား မြို့ရွာ၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများတွင် တိုက်ပွဲမဖြစ်ပါပဲလျက် တိုက်ပွဲများဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာထဲတွင် ရှိမနေသော လက်နက်ကိုင်များကို ရှိနေသည် ဟူ၍လည်းကောင်း လီဆယ် အကြောင်းပြလျက် တမင်တကာ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုများ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိနေပါသည်။
ထိုသို့ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်မှန်း သိပင်သိသော်လည်း ထိုသို့မဖြစ်ပျက်သည့်ပမာသော်လည်းကောင်း ဖြစ်ရပ်ပြောင်းပြန်ကိုသော်လည်းကောင်း သတင်းစာကြီးများက ရေးသားခြင်းများ ရှိနေသည့်အပြင်၊ ဟုတ်တယ် မရှိမှန်းသိသိ နဲ့ အသားလွတ်ပစ်တယ် ဘာဖြစ်လဲ ဆိုသည့် ပြောဆိုမှုများ၊ လှောင်ပြောင်သရော်မှုများ၊ လိမ်လည်မှုများကို တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ကစ၍ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ပြောဆိုပြုမှုနေကြသည်ကို ကြားမြင်နေရပါသည်။
တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုပေါင်းရာချီရှိနေကြသော ဤနိုင်ငံတွင် ပြည်မနေ ဗမာလူမျိုးများနှင့် အနီးဆုံး ဆွေမျိုး တော်စပ်သည့်အပြင် ဘာသာစကား နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည့် ရခိုင်လူမျိုးများကိုတောင်မှ ဤကဲ့သို့ ဆက်ဆံနေကြပါကလား ဟူ၍ စောင့်ကြည့်နေသူ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့က နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့က နှလုံးသားထဲတွင် စွဲမြဲစွာမှတ်ယူ နှလုံးသွင်းနေကြလေပြီ။ ထိုကဲ့ တရားလက်လွတ် မဟုတ်မမှန် ပြောဆို လှောင်ပြာင်သူတို့၏ သားမယားမိသားစုများအပေါ် ကံ၏အကျိုးပေးလျက် အတိဒုက္ခရောက်ပါစေ ဟု ကျိန်စာတိုက်သူများက တိုက်နေလေပြီ။
ထိုကဲ့သို့ ပြုမူပြောဆိုမှုများကို ကိုယ်တိုင်ရှောင်ကြည်ခြင်း၊ အများသူငါတို့အား ထိုကဲ့သို့ မပြုမူကြပါရန် တိုက်တွန်းခြင်းတို့အား ရခိုင်မဟူ ဗမာမဟူ ဤနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများက မြင့်မြတ်သော စိတ်ရင်းစေတနာ အရင်းခံတို့ဖြင့် ပြောဆိုဆောင်ရွက်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ သို့မှသာလျှင် တိုင်းရင်းသားများ အချင်းချင်း တန်းတူညီမျှစွာ အမှန်တကယ် ချစ်ကြည်စွာ နေနိုင်ကြမည့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုအား တည်ဆောက်နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ မြေပြင်တွင် မရှုမလှ ရှုံးပွဲဝင်နေသည့် တိုက်ပွဲဝင်လက်နက်ကိုင်များအား မမှန်ကန်သော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် မတရားသော စစ်ပွဲထဲသို့ အတင်းအဓမ္မ ဆွဲသွင်းကာ တိုက်ခိုက်နေစေခြင်းမျိုး ဖြစ်ပျက်နေသည်ဆိုပါက – ဤသို့သော ဖြစ်ရပ်၏လိုရင်းအချုပ်ကို ဆိုရလျှင် ထိုသူတို့အား အလဟဿ သေပွဲဝင်နေစေခြင်းမျှသာ ဖြစ်လေသည်။ ဤသတင်းစကားကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားအများတို့အား သိစေလိုပါ၏။
လှပသော အနာဂတ်ကို ပြိုင်တူ တည်ဆောက်ကြရန် အချိန်နောက်ကျသွားပြီ ဟူ၍ မရှိနိုင် ဆိုသော အသိကို ကိုင်စွဲလျက်၊ လောက၏ သဘာဝဓမ္မသည် အကျိုးပေးခြင်း နှင့် အပြစ်သင့်စေခြင်းတို့ကို အလိုအလျောက်ဖြစ်ပျက်စေသည် ဟူသော အသိကိုလည်း ကိုင်စွဲလျက်၊ မိမိကိုယ်တိုင်တို့၏ စိတ်နှလုံးတို့ အားလည်း ကယ်တင်ကြလျက် မိမိနေထိုင်ရာ ပြည်ရွာအား ပိုမိုသန့်ရှင်းလှပသော နေရာအဖြစ် ၀ိုင်းဝန်း တည်ဆောက်ကြဖို့ရာ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၂၀၁၉ မတ်လ (၂၄) ရက်
မွနျမာပွညျသူ မွနျမာပွညျသားမြား ခငျဗြား . . .
မညျသူ့ကိုမှ အန်တရာယျမပွုသော အပွဈမဲ့ သာမနျအရပျသားမြားကို သစေရေနျ ရညျရှယျလကျြ အရပျသား မွို့ရှာ၊ ရပျကှကျ၊ ကြေးရှာမြားတှငျ တိုကျပှဲမဖွဈပါပဲလကျြ တိုကျပှဲမြားဖွဈသညျဟူ၍လညျးကောငျး၊ ရပျရှာထဲတှငျ ရှိမနသေော လကျနကျကိုငျမြားကို ရှိနသေညျ ဟူ၍လညျးကောငျး လီဆယျ အကွောငျးပွလကျြ တမငျတကာ ပဈခတျသတျဖွတျမှုမြား အမှနျတကယျ ဖွဈပှားလကျြ ရှိနပေါသညျ။
ထိုသို့ အမှနျတကယျဖွဈပကျြမှနျး သိပငျသိသျောလညျး ထိုသို့မဖွဈပကျြသညျ့ပမာသျောလညျးကောငျး ဖွဈရပျပွောငျးပွနျကိုသျောလညျးကောငျး သတငျးစာကွီးမြားက ရေးသားခွငျးမြား ရှိနသေညျ့အပွငျ၊ ဟုတျတယျ မရှိမှနျးသိသိ နဲ့ အသားလှတျပဈတယျ ဘာဖွဈလဲ ဆိုသညျ့ ပွောဆိုမှုမြား၊ လှောငျပွောငျသရျောမှုမြား၊ လိမျလညျမှုမြားကို တဈဦးတဈယောကျခငျြး ကစ၍ တှငျတှငျကယျြကယျြ ပွောဆိုပွုမှုနကွေသညျကို ကွားမွငျနရေပါသညျ။
တိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျစုပေါငျးရာခြီရှိနကွေသော ဤနိုငျငံတှငျ ပွညျမနေ ဗမာလူမြိုးမြားနှငျ့ အနီးဆုံး ဆှမြေိုး တျောစပျသညျ့အပွငျ ဘာသာစကား နှငျ့ ယဉျကြေးမှု အနီးစပျဆုံးဖွဈသညျ့ ရခိုငျလူမြိုးမြားကိုတောငျမှ ဤကဲ့သို့ ဆကျဆံနကွေပါကလား ဟူ၍ စောငျ့ကွညျ့နသေူ တိုငျးရငျးသားပေါငျးစုံတို့က နိုငျငံသူနိုငျငံသားတို့က နှလုံးသားထဲတှငျ စှဲမွဲစှာမှတျယူ နှလုံးသှငျးနကွေလပွေီ။ ထိုကဲ့ တရားလကျလှတျ မဟုတျမမှနျ ပွောဆို လှောငျပွာငျသူတို့၏ သားမယားမိသားစုမြားအပျေါ ကံ၏အကြိုးပေးလကျြ အတိဒုက်ခရောကျပါစေ ဟု ကြိနျစာတိုကျသူမြားက တိုကျနလေပွေီ။
ထိုကဲ့သို့ ပွုမူပွောဆိုမှုမြားကို ကိုယျတိုငျရှောငျကွညျခွငျး၊ အမြားသူငါတို့အား ထိုကဲ့သို့ မပွုမူကွပါရနျ တိုကျတှနျးခွငျးတို့အား ရခိုငျမဟူ ဗမာမဟူ ဤနိုငျငံသူနိုငျငံသားမြားက မွငျ့မွတျသော စိတျရငျးစတေနာ အရငျးခံတို့ဖွငျ့ ပွောဆိုဆောငျရှကျကွပါရနျ မတ်ေတာရပျခံတိုကျတှနျးအပျပါသညျ။ သို့မှသာလြှငျ တိုငျးရငျးသားမြား အခငျြးခငျြး တနျးတူညီမြှစှာ အမှနျတကယျ ခဈြကွညျစှာ နနေိုငျကွမညျ့ စဈမှနျသော ပွညျထောငျစုအား တညျဆောကျနိုငျကွမညျ ဖွဈပါသညျ။
အကယျ၍ မွပွေငျတှငျ မရှုမလှ ရှုံးပှဲဝငျနသေညျ့ တိုကျပှဲဝငျလကျနကျကိုငျမြားအား မမှနျကနျသော အကွောငျးပွခကျြမြားဖွငျ့ မတရားသော စဈပှဲထဲသို့ အတငျးအဓမ်မ ဆှဲသှငျးကာ တိုကျခိုကျနစေခွေငျးမြိုး ဖွဈပကျြနသေညျဆိုပါက – ဤသို့သော ဖွဈရပျ၏လိုရငျးအခြုပျကို ဆိုရလြှငျ ထိုသူတို့အား အလဟဿ သပှေဲဝငျနစေခွေငျးမြှသာ ဖွဈလသေညျ။ ဤသတငျးစကားကို မွနျမာပွညျသူပွညျသားအမြားတို့အား သိစလေိုပါ၏။
လှပသော အနာဂတျကို ပွိုငျတူ တညျဆောကျကွရနျ အခြိနျနောကျကသြှားပွီ ဟူ၍ မရှိနိုငျ ဆိုသော အသိကို ကိုငျစှဲလကျြ၊ လောက၏ သဘာဝဓမ်မသညျ အကြိုးပေးခွငျး နှငျ့ အပွဈသငျ့စခွေငျးတို့ကို အလိုအလြောကျဖွဈပကျြစသေညျ ဟူသော အသိကိုလညျး ကိုငျစှဲလကျြ၊ မိမိကိုယျတိုငျတို့၏ စိတျနှလုံးတို့ အားလညျး ကယျတငျကွလကျြ မိမိနထေိုငျရာ ပွညျရှာအား ပိုမိုသနျ့ရှငျးလှပသော နရောအဖွဈ ၀ိုငျးဝနျး တညျဆောကျကွဖို့ရာ တိုကျတှနျးအပျပါသညျ။
၂၀၁၉ မတျလ (၂၄) ရကျ
Previous မွို့ပျေါ ရမျးကားပဈခတျမှုမြား ကာကှယျရေး နှငျ့ တုနျ့ပွနျရေးဆိုငျရာ အကွံပွုခကျြ
Next လူသတျတပျဖှဲ့ဆီကို ဦးတညျနတေဲ့ သဲလှနျစမြား